क्यान्सर रोगीलाई आवश्यक पर्ने झोला उत्पादन नहुँदा समस्या | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
क्यान्सर रोगीलाई आवश्यक पर्ने झोला उत्पादन नहुँदा समस्या
प्रकाशित मिति ९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०८:२७ लेखक नेपाली जनता
चितवन । मूत्रनली र मलद्वारको क्यान्सरको शल्यक्रियापछि धेरै बिरामीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने प्लाष्टिकको झोला (कोलोेस्टोमी र युरोस्टोमी ब्याग) नेपालमा उत्पादन नहुँदा महँगो मूल्यमा खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
ती दुई क्यान्सरको शल्यक्रियापछि उपचार गराइरहेका देशभरका बिरामीको बुधबार यहाँ सम्पन्न भेलामा उनीहरुले स्वदेशमा झोला उत्पादन गर्न माग गरेका हुन् । विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका उपनिर्देशक एवं मूत्ररोग विशेषज्ञ डा. निर्मल लामिछानेका अनुसार एउटा झोला खरीद गर्न बिरामीले रु एक हजार ५०० हाराहारी तिर्नुपर्ने हुन्छ । अस्पतालले दाता खोजेर स्टोमा सेवा समाजमार्फत न्यून शुल्कमा दिँदै आएको भए पनि सधैँ सबैले पाउने अवस्था छैन ।
लामिछाने स्वदेशमै झोला उत्पादन गर्न सके बिरामीले सस्तो मूल्यमा सहजरूपमा पाउन सक्ने बताउँछन्र । सबै बिरामीको अपेक्षा रहेको भन्दै उनले मूत्रथैलीको शल्यक्रिया गरेकामध्ये ३० प्रतिशत हाराहारीलाई र मलद्वारको शल्यक्रिया गरेकामध्ये २० प्रतिशतलाई यो झोला अनिवार्य हुने बताए । दिसा पिसाबको प्राकृतिक बाटो परिवर्तन गरी कृत्रिमरूपमा दिसा पिसाब त्याग गर्न झोला प्रयोग गरिन्छ ।
एउटा बिरामीलाई न्यूनतम सात दिनमा झोला फेर्नु पर्दछ । जटिल समस्या देखिएमा दैनिकजसो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुने गरेको छ । कोलोेस्टोमी र युरोस्टोमी झोला अहिले नेपालमा उत्पादन नहुँदा र समय–समयमा नपाउँदा बिरामीलाई समस्या पर्ने गरेको समाजका सचिव मीनबहादुर अछामेले बताए ।
उनले भने, ‘अहिले अस्पतालले वितरण गरिरहेको छ । तर अस्पतालमा नभएको समयमा बिरामीको शरीर गन्हाउने र ‘एलर्जी’ हुनेसम्मका समस्या देखा पर्दछ ।’ अस्पतालले अहिले एउटा झोलाको रु २० का दरले वितरण गर्दै आएको छ । अस्पतालमा नपाउँदा बिरामीले महँगोमा खरीद गर्नुपरेको भन्दै अछामेले सबैको पहलमा नेपालमै झोला उत्पादन गर्नुपर्ने बताए ।
झापाबाट झोला लिन क्यान्सर अस्पताल आइपुगेका ५९ वर्षीय डोरबहादुर खत्रीले सर्वसुलभरूपमा नपाउँदा लामो यात्रा गरेर अस्पतालमा आउन बाध्य भएको बताए । बाहिर किन्दा महँगो पर्ने भएकाले नियमितरूपमा आएर झोला लैजाने गरेको उनले बताए । यहीं उत्पादन भए सबैतिर पाइने बताउँदै उनले नेपालमा उत्पादन नहुँदा बिरामीले दुःख पाएको गुनासो गरे ।
स्टोमा सेवा समाजका अध्यक्ष देवीलाल ढकालले राज्यले यस्ता बिरामीको सेवाका लागि झोला नेपालमै उत्पादन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । अहिले यो झोला प्रयोग गर्ने ६७० रहेको बताउँदै उनले नेपालभर छरिएका बिरामीलाई भरतपुर आएर सेवा लिन असहज भएको बताए । दातृ संस्थाको भरमा झोला प्रयोग गर्नुपरेकामा दुःख व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘कुनै समय झोला आउन ढिला भयो भने हामीलाई सङ्कट आइपर्छ । नेपालमै उत्पादन भएमा सहजरूपमा पाउन सकिन्थ्यो ।’
अहिले यो झोला प्रयोग गर्नेमा ५१७ मलद्वार र १५३ मूत्रनलीका बिरामी रहेका छन् । अस्टोमेट एशोसिएसन अमेरिकाले वार्षिक रु चार करोड बराबरको झोला सहयोग गर्दै आएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यले यस्ता बिरामीको उपचारका लागि अस्पतालले नियमित बहिरङ्ग विभाग सञ्चालनमा ल्याउने बताए । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका बिरामीलाई दाताले दिएको झोला प्रयोग गर्न दिएर सक्षमले खरीद गरिदिएमा सहज हुने उनले बताए । नेपालमा हुने क्यान्सर रोगमध्ये मलद्वारको क्यान्सर छैठौंमा पर्दछ भने पिसाब थैलीको सातौंमा पर्दछ ।
धर्म प्रचार गर्ने जापानी विद्यार्थीलाई नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध
काठमाडाैं । गृह मन्त्रालयले दुई जापानी नागरिकलाई निकालेको छ । गृहले इसाई धर्म प्रचारमा संलग्न मोरिता मासाहिरो र हासिमोतो…
सेनामा आर्थिक अराजकता, सवा एघार अर्ब बेरुजु !
काठमाडौं । नेपाली सेनाजस्तो अनुशासित, मर्यादित र पेशागत संस्थामा आर्थिक अराजकता र खरिद अनियमितताका घटनाहरू बढ्दै जानु निश्चय नै…
घूसकाण्डमा मुछिएका डिभिजन सिँचाई दोलखाका प्रमुख किर्ते अभियोगमा पुनः पक्राउ
दोलखा । घूस काण्डको मुद्दामा धरौटीमा छुटेका जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन दोलखाका प्रमुख प्रकाश अधिकारी सरकारी छाप…
तीन महिनादेखि कार्यालय प्रमुखविहीन
हुम्ला । जिल्लाको एक मात्र मालपोत कार्यालयमा तीन महीनादेखि कार्यालय प्रमुख नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
कर्मचारी समायोजनसँगै हुम्लाको…
सार्वजनिक स्थानमा बिना पासवर्डको वाइफाइ राख्न सरकारी प्रतिबन्ध
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक स्थानमा पासवर्डबिनाको वाइफाई राख्न नपाइने गरी मापदण्ड ल्याउने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले…
रामेछापमा ११ जनामा डेंगु, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै
रामेछाप । रामेछापमा ११ जना डेंगुको बिरामी फेला परेपछि जिल्ला भरि नै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
केटा मान्छेले सेक्स सम्बन्धको बेलामा गर्ने ५ गल्ति 15 views
“माइतीघर मण्डलामा दुःख नगरे हुन्छ” 10 views
आजको राशिफल7views
देशैभरको मौसममा बदली, फेरि पानी पर्ने7views
नियमित सेक्स गर्ने महिला कसरी चिनिन्छन् ? जान्नुहोस् यो रोचक कारण7views
नेपालका लागि नयाँ भारतीय राजदूतमा विनयमोहन6views